Zimbabwe - Xinhua Silk Road
Zimbabwe Sorting by the latest release time
China's Gansu province donates medical supplies to Zimbabwe to combat COVID-19
China's northwest Gansu Province on Wednesday donated a consignment of medical supplies to Zimbabwe's Mashonaland West Province to help fight the spread of COVID-19.
Two Chinese companies on Tuesday handed over some medical supplies to a Zimbabwean foundation initiated by Zimbabwe's First Lady Auxillia Mnangagwa.
Zimbabwe's China-funded COVID-19 treatment and isolation center upgrade complete
Zimbabwe's main COVID-19 isolation and treatment center, Wilkins Hospital, which was upgraded by Chinese enterprises at a cost of more than 500,000 U.S. dollars, has been completed.
China's investment key to Zimbabwe's economic development: minister
Chinese investments are key to Zimbabwe's economic development, said a senior Zimbabwean official on Wednesday.
Interview: Zimbabwean ruling party urges win-win resolution of China-U.S. trade impasse
Zimbabwe's ruling ZANU-PF party on Thursday condemned the ongoing U.S.-initiated trade war against China as unjustified and unnecessary, urging the two sides to quickly find an amicable and win-win solution to the trade impasse.
Zimbabwe on Wednesday held an investment forum for a visiting business delegation from China's Anhui Province that is seeking trade and investment opportunities in the country.
Chinese investors have established a ceramic tile and porcelain manufacturing company in Zimbabwe.
Zimbabwe's main airport is set to undergo a major facelift to be funded by China as part of the government's efforts to transform the facility into a regional aviation hub.
Coal-fired power station expansion project undertaken by Chinese firm starts in Zimbabwe
The expansion project of Zimbabwe’s Hwange coal-fired power station undertaken by Power Construction Corporation of China (PowerChina) was officially started on June 27.
China releases funding for Zimbabwe's largest power station expansion
China has released funding for Zimbabwe's largest power station expansion project - the expansion of the Hwange power station, paving way for commencement of work, Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa revealed on Thursday.
Zimbabwe is on course to complete the Kariba South Expansion Project by December, which is being built by China's Sinohydro, an official said Monday.
Zimbabwe's state-owned fixed line telephone operator TelOne on Thursday launched a world class data center which is part of the national broadband project being funded by China Exim Bank.
Zimbabwe's diamond firms takeover unlawful: official
The takeover of gem-mining firms in Marange by the Zimbabwe government last year was unlawful, a Zimbabwean diamond industry official said Monday.
Chinese investor Beijing Pinchang is set to inject 100 million U.S. dollars into a tin mine in Zimbabwe in a deal that will see the company and Zimbabwe's state mining entity jointly owning the firm, according to a Zimbabwean cabinet minister.
China has released an initial tranche of 46 million U.S. dollars for the construction of a new parliament building in Zimbabwe's capital Harare, a Zimbabwe official has said.